Python2 Lesson 13 (Conclusion) - Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 13 (Conclusion)
Python2 Lesson 13 (Conclusion)
by KhitMinnyo on November 11, 2017 in Python-for-Hackers
Lesson 11 ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson 12 ကြည့်ရန် link >> Click Here
စတင်လေ့လာမည့်သူများ သင်ခန်းစာ ၁ မှ စကြည့်ပါ
ကဲ ဒီနေ့ သင်ခန်းစာလေးတွေကို ဆက်ရအောင်။
OOP = Object Oriented Programming ကို ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပါမယ်ဗျ။
Object တွေနဲ့ တည်ဆောက် ရေးသားရတဲ့ ပုံစံလို့ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ Object ပုံစံဆိုတာက ObjectName.Attibute&method ပေါ့။
Object မှာက အချက်အလက် attibute နဲ့ အဲဒါတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ Method ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။ Attibuet ဆိုတာကတော့ Object အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ အမည်၊ အသက်၊ စတဲ့ ဒေတာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
Method ဆိုရာမှာတော့ Objct အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာ ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာတွေတတ်တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီအပိုင်းတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
Object ရေးရာမှာတော့ တိုက်ရိုက်ရေးလို့ မရပါဘူး။ ရေးနိုင်ဖို့အတွက် Class တွေ တည်ဆောက်ပေးရပါတယ်ဗျ။
ကဲ လက်တွေ့လေး သိရအောင် idle လေးဖွင့် ထုံးစံအတိုင်း file >> new လေးခေါ်။ စ ကြ ရအောင်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ထွက်လာတဲ့ new file ထဲမှာ class တစ်ခု တည်ဆောက်ပြပါမယ်။
name = 'Khit Minnyo'
class အမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်တာ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု def လေးထပ်ဖြည့်လိုက်ရအောင်။
return "Hello, I'm method1..."
method တည်ဆောက်ပုံကိ လေ့လာပါ။ idle မှာ စာရိုက်သွားတဲ့အခါ အပြာရောင် နံ့ အစိမ်းရောင်နေရာက စာသားတွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာတွေကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
method တည်ဆောက်တဲ့အခါ method နာမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်ရာကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသော်လည်း နောက်မှာ (self) ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုနေ ဖိုင်ကို Desktop ပေါ် Save ပြီး Run ကြည့်ရင် ဘာမှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
khit = kmn()
... ဆိုပြီး ထပ်ဖြည့်လိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ RUN ကြည့်မယ်ဆိုရင် name & age ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံ RUN ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဘာတွေ ထပ်တိုးလာလဲဆိုတာလေး သတိထားနေပေးနော်။
အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံ ဖြည့်လိုက်ရအောင်။
print khit.method3("Aung Aung")
RUN ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဘာတွေ ထူးခြားသွားပါသလဲ။
ဒီနေ့အတွက် lesson များပါမယ်။ lesson ၁ ကိုတော့ ခုနေရာမှာ ရပ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lesson2ကို ဆက်လေ့လာရအောင်။
ဒီနေ့အတွက် lesson2ကို သီးသန့်လေး ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Lesson 1 ကလိုပဲ class ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် lesson2မှာတော့ class ကိုမှ method နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး လေ့လာရအောင်ပါ။
အသစ် စတင်မှာဖြစ်လို့ idle တွေ ဖွင့်ထားတာရှိရင် ပိတ်လိုက်ပါဦး။ ပြီးမှ အသစ်ပြန်ဖွင့်သုံးပါ။
return "Hello %s" % self.name
ပထမဆုံးအနေနဲ့ khit ဆိုတဲ့ class တစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတဲ့အခါ def နဲ့ defination ဖွင့်လိုက်တာက
method one က အဖြေထုတ်တာမဟုတ်ပါ။ သူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် user က တစ်ခုခု ရိုက်ထည့်ရမယ့် ပုံစံနဲ့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
method two ကတော့ one မှာ ရေးထည့်ခဲ့တဲ့ အဖြေကို ပြန်ယူသုံးမယ်ဆိုပြီး ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
method three self.name ကိုပဲ Hello ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ ပြန်ပေါင်းပြီး အဖြေထုတ်မှာပါ။
%s ကတော့ variable တစ်ခုခုရဲ့ အဖြေကို ထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ % self.name ဆိုတာကတော့ self.name ကိုပဲ
အဖြေထုတ်မယ်ဆိုတာ ပြတာပါ။ % ကို self.name ရဲ့ ရှေ့မှာ ထပ်ထည့်ပေးတာကတော့ %s ဆိုပြီး ပြခဲ့တာ ဒီအရာမှန်း စက်က သိအောင်
ခုနေ RUN ကြည့်ရင် ဘာမှ အဖြေထွက်လာမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။
နောက်ပြီး ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တည်ဆောက်ပြခဲ့တဲ့ method ၃ခုမှာ method 1 က အဓိကပါ။ သူ့ဆီက အဖြေကိုပဲ ကျန်တဲ့၂ခုမှာ ယူသုံးမှာဆိုတာ ရှင်းပြထားပြီးသားနော်။
သူတို့တွေ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် object ကလေးတွေ ဖန်တီးလိုက်ရအောင်။
answer = khit()
အထက်ပါ Obj လေးများကို ခုနဖိုင်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ ထပ်ထည့်လိုက်ရအောင်။
အဲသည်မှာ one ကို ကျွန်တော်က John လို့ ဒေတာထည့်လိုက်ပါပြီ။ အဓိကဒေတာ ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်လို့ method2နဲ့3တို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သွားပါပြီ။
မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်တာက class တစ်ခုခု ဖန်တီးပြီးသွားတာနဲ့ အဲသည် class အတွက် method နဲ့ Object တွေကို အရေအတွက်ကြိုက်သလောက် ထပ်ဖြည့်ထည့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ခုန အောက်မှာ ဒါလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ကြည့်ပါဦး။
answer2 = khit()
ပြီးရင် Run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နောက်ထပ် အဖြေတွေ ထပ်ထုတ်ပေးတာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒီနည်းနဲ့ answer တွေ အများကြီး ဆက်ထုတ်လို့ ရသွားပါပြီ။
ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထားတဲ့ဖိုင်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ answer တွေက ကျွန်တော်ရေးချင်ရာ ရေးလိုက်တာပါ။a, b, c ထားလည်း ရပါတယ်။ ဒါဆို ဖိုင်ကို နောက်တစ်နည်း ထပ်ရေးပြပါဦးမယ်။ ကြည့်ကြည့်ပါဗျ။
ဒီအထိပဲ ချန်ပြီး ကျန်တာတွေ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ကနေ ဒါတွေကို ဆက်ရိုက်ကြည့်ရအောင်။
ပြီးရင် RUN ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့ data တွေအလိုက် print ထုတ်ခိုင်းတာတွေကို ထုတ်ပြပေးသွားတာ မြင်ရပါမယ်။
ကဲ lessson2ကို ရပ်လိုက်ကြဦးစို့။
lessson3ဆက်ကြည့်ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ Super Class and Sub Class ကို ဆက်လက် လေ့လာရအောင်ပါ။
Superclass = Parentclass
Subclass = Childclass လို့ မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Superclass = Parentclass ဖြစ်တဲ့အတွက် သူက main ပေါ့။
Subclass = Childclass ဖြစ်တာကြောင့် superclass ထဲက ကုဒ်လိုင်းတွေကို ပြန်ပြီး မွေးစားသုံးလို့ရတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပဲ idle ဖွင့်ထားတာတွေကို ပိတ်လိုက်ပါ။ လုံးဝ အသစ် ပြန်စမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒီခါတော့ file new မခေါ်သေးဘူးဗျာ။ idle ဖွင့်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ဖိုင်ထဲမှာပဲ တိုက်ရိုက် ရိုက်ထည့်ရအောင်။
>>> class supclass:
one="I am 1"
two="I am 2"
>>> အထက်ပါအတိုင်း superclass ကို ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ variable ၂ခု ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်လိုင်းကူးနိုင်ဖို့ enter ၂ချက်ဆင်းရပါမယ်။ သတိထားစေချင်တာလေးက class နောက်က supclass ဆိုတာ superclass ဖြစ်ကြောင်း မှတ်မိစေချင်လို့ ရေးထားတာနော်။ ကိုယ်ကြိုက်ရာရေးမှတ်နိုင်တယ်။ အပြာရောင်နဲ့ပေါ်တဲ့စာလုံးတွေ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့ပြီးသား။ one two လည်း အဲအတိုင်းပဲ။ variable သတ်မှတ်ခဲ့တုန်းကလိုပဲ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ variable သတ်မှတ်လို့ ရတယ်။ ခုက နမူနာပဲ ပြတာ။
ဒုတိယလိုင်းရောက်ပြီဆိုရင် subclass ထည့်ရအောင်။
>>> class subclass(supclass):
ဒုတိယထည့်သွင်းတဲ့ subclass ကို pass နဲ့ ကျော်လိုက်ပါတယ်။
'I am 1' လို့ ထုတ်ပေးတာ တွေ့ရပါပြီ။
'I am 2'
ဒီခါ subclass ကို ဆက်တွဲရအောင်.
'I am 1'
တွေ့ရပါပြီ။ one two function တွေမှာ အဖြေတူနေတာတွေ့ရမယ်။ အကြောင်းက subclass သတ်မှတ်ခဲ့စဉ်က pass လုပ်ပြီး ကျော်ခဲ့တာမို့ မူလ parent class ဖြစ်တဲ့ supclass ဆီကနေ ယူသုံးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နားလည်လောက်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျ။ ပိုရှင်းသွားအောင် နောက်တစ်ပုဒ်နဲ့ ထပ်လေ့လာရအောင်။
idle ကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အသစ်ပဲ စ ရအောင်ပါ။
ဒီခါတော့ supclass ကို kmn လို့ သတ်မှတ်ပြီး subclass ကို kkk ပုံစံနဲ့ သွားပါမယ်။
idle ကိုဖွင့်။ file >> New ယူပြီး အောက်ပါကုဒ်တွေ ရေးပါ။
x="I am x."
y="I am y."
ပြီးရင် Desktop ပေါ်မှာ ကြိုက်ရာနာမည်နဲ့ Save ပါ။ RUN ကြည့်ပါဦး။
Lesson3ကို ဒီနေရာမှာပဲ ရပ်ပါရစေ
Lesson4လာပါမယ်။
ထုံးစံအတိုင်း idle ဖွင့်ထားတာတွေ အကုန်ပိတ်။ အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီး new ခေါ် ရေးရအောင်။
အောက်ပါ ကုဒ်လိုင်းလေးတွေကို ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။
lesson3မှ ပုံစံတူများ
var1="I'm number one.."
var2="I'm two two two...."
obj =object ကို ဆိုလိုသည်။ နှစ်သက်ရာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
var = variable ကို ဆိုလိုသည်။ နှစ်သက်ရာ သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ပြင်ထားတာတွေ မြင်အောင် ကြည့်ပါ။
ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ Python2 Programming Free Lesson လေးများကို ရပ်နားပါရစေခင်ဗျာ
အတော်များများကို နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်
နောက်ရက်တွေမှာတော့ Python Programming တင်ပေးဖြစ်ရင်တောင် Python3ဘက်ကို ပြန်လှည့်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာမို့ပါ
By KhitMinnyo on November 11, 2017